Anatoliy Bledny - सम्मान कलाकार, थिएटर र सिनेमा को अभिनेता। प्रान्तीय मा युद्धपछिको अवधिमा जन्म, अर्थात् अप्रिल 14, 1949 एक मानिस।
प्रसिद्ध अभिनेता को आमाबाबुले कामबाट टाढा थियो - आफ्ना पिता एक सैन्य रूपमा काम र यसलाई आफ्नो जीवनको एक व्यक्तिको पेशा मानिन्छ। स्कूल पछि एक मान्छे पनि सेना सेवा गर्न निर्णय किन हो। र बस कहीं, तर सामरिक मिसाइल बलहरु मा। तथापि, अनातोली सेवा गर्न मन - चरण मा काम हो - उहाँले आफ्नो साँचो व्यक्तिको पेशा थाह थियो।
सेना पछि, यो थिएटर स्कूल भर्ना गर्न समय। धेरै कठिनाई बिना, तर ठूलो उत्साह सबै परीक्षाहरू र क्वालिफाइङ प्रतियोगिताहरु को एक सानो बिट हटाउन गरिएको छ। यसबाहेक Shchukin स्कूल, Anatoliy Bledny पनि एमएटी र GITIS मा, तेस्रो चरणको लागि पहिलो कल पछि तुरुन्तै भंग प्रविष्ट गर्नुभयो। एक अति गहिरो नीलो आँखा नाजुक गोरो जवान मानिस, उहाँले तत्काल परीक्षण हृदय जितेको र आफ्नो संख्या प्रशिक्षित द्वारा मोहित।
को थिएटर मा काम
पहिलो र काम अभिनेता को वर्तमान स्थान Kalinin थियेटर भयो। यो दृश्य सधैंभरि दर्शक गरेको भावनाहरूको अध्ययन कौशल र familiarity समयमा प्राप्त परीक्षण तिनलाई सम्झना छ। तर, योद्धा औपनिवेशिक आक्रामकता प्रभुत्व जो खराब टीम, छोड्नुको मुख्य कारण थियो - यो लगभग काम गर्न असम्भव थियो।
Kalinin को सानो शहर जोडी (समयमा विवाह भएको थियो अनातोली) व्लादिमीर Podolsky छोड्न बाध्य विवाह देखि, त्यो कलिनिन्ग्राद मा troupe काम गर्न निमन्त्रणा गरिएको थियो। यहाँ Anatoliy Bledny अधिक तीस भूमिकाको पूर्ण सबै आवश्यक आफ्नो परिवारको लागि प्ले।
यो हुनुपर्छ रूपमा सबै त गुलाबी थियो - संकट को एक क्षण एक नाटकीय वातावरण आउनुभयो। पैसा र काम बिना लामो समय पछि, Svetlana र अनातोली Vorkuta उत्प्रेरित गर्ने निर्णय गरे। तिनीहरूले आठ वर्ष साल को शहर मा बसे, र यो समयमा सोभियत संघ को क्षेत्र मा आफ्नो सहकर्मीसँग यात्रा, सफल प्रदर्शन को एक नम्बर राख्न छन्।
थप कलाकार परिवार, ओरेनबर्ग सारियो प्ले मंचन "प्रेम को पेन्टागन।" शो कि पाँच वर्ष को लागि थिएटर मा राख्नु भएको थियो, त्यसैले सफल भयो। Anatoliy Bledny जसको फोटो लेख मा देख्न सकिन्छ, क्षेत्रीय प्रशासन लागि मनोनीत गरिएको छ। "ओरेनबर्ग लिरा" - debriefing 1998 को समयमा अनातोली प्रतिष्ठित पुरस्कार जित्यो।
परिवार र भइरहेको बच्चाहरु
अनातोली Kalinin थिएटर धन्यवाद भेटे र Svetlana नाउँकी केटी सबै मेरो हृदयले प्रेम गरे पेले। यो आफ्नो पत्नी, एक स्थायी मित्र र दुई शासकका एक आमा हुने भविष्यमा यो महिला थिए। साथै, केटी छैन यो पहिलो नजर मा जस्तो हुन सक्छ रूपमा सजिलो थियो - Svetlana को princely परिवार र पुरानो नाम को continuer सन्तान हुनुहुन्थ्यो। हल्का भविष्य पति संग familiarization समयमा उहाँले पहिले नै सहायक निर्देशक को स्थिति मा स्थान लिएको र घर मा एक थिएटर मा महसुस भएको छ।
जोडी लामो प्रतीक्षा पहिलो जन्म एलिया देखा, र अब बच्चा संग तिनीहरूले थिएटर थिए।
एक छोरा फिलिप, जो पनि चरण मा वृद्धि - 1998 मा, Svetlana र अनातोली दोस्रो बच्चा जन्मिएको थियो। वातावरण र प्राकृतिक प्रतिभा मा स्थिर उपस्थितिको धन्यवाद, केटा अन्य प्रमुख निर्माण मा 10 वर्ष मा प्ले "प्रेम पेन्टागन" मा भूमिका खेल्दै, र त्यसपछि भएको थियो। क्षणमा, र फिलिप र इल्या पेले चलचित्र प्ले, तिनीहरूले एक नाटकीय वातावरण मा मांग गर्दै छन्।
Dzhessika Zor: जीवनी, पेसा, व्यक्तिगत जीवन
"Quartet": आफ्नो सहभागिता साथ चलचित्र। सामूहिक को उद्भव को सूची र इतिहास
जीवनी Svetlana Permyakova - सफल रूसी अभिनेत्री र रेडियो पाहुना
Mehmet Günsür - अभिनेता, मोडेल, निर्माता र व्यापारी
चाँडै बच्चाहरूलाई गन्ती गर्न कसरी सिक्न सकिन्छ?
सानो फारमहरु लागि के बगैचा sprayers प्रयोग गर्न सकिन्छ?
ज्यित्सवको क्यूब्स: पढाउने शिक्षण विधि